Oke oyi: ezumike ezumike nke Norway | Akụkọ Njem
El udu mmiri na norway Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị oyi nke enwere ike ibi, mana ọtụtụ mmadụ na-eche ụbọchị ndị a ka ha nwee ike ịnụ ụtọ amara nke obodo a na ịma mma ya niile. Eziokwu bụ na mmụba nke njem n'oge oge oyi a, ihe omume abawanyela iji nwee ọ entertainụ n'ọnwa ndị a, yana n'ezie ọ nwere ike ịbụ ezumike na-atọ ụtọ ma agaghị echefu echefu.
Na Norway anyị agaghị enwe ike lee oke ohia ala ndi ozo adighi nma nke ahụ ga-eme ka anyị laghachi na mmalite, mana enwekwara ebe a na-ekpori ndụ, na egwuregwu dị ka ịgba ọsọ ma ọ bụ njem na sleds snow nke nkịta siri ike Husky wetara. Ọbụna ndị na-ahọrọ ebe na-ekpo ọkụ mgbe niile ga-ahụ ihe kpatara ha iji leta obodo a n'oge oke oyi. Na-ege ntị na amụma niile!
2 Jgbọ mmiri Fjord
3 Szụ ụgbọ ịnyịnya nke Huskies wetara
4 Na-ehi ụra na nkwari akụ ice
You chetara mgbe anyị gwara gị maka ebe kachasị mma ịchụ nta ọkụ ugwu? Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu isi ihe kpatara ndị na-eduga ọtụtụ puku ndị njem nleta ịnụ ụtọ oge oyi Norway. Ihe omuma ndia enwere ike ihu na mpaghara ugwu, na oge oyi, ọkachasị n’etiti Ọktoba na Machị, yabụ echefula ohere ahụ. N’ụzọ doro anya, a ga-agwa gị nke ọma banyere ebe kachasị mma na ụbọchị iji nwee obi ụtọ na auroras, ebe ọ bụ na ekweghị nkwa na ha ga-eme. Agbanyeghị, nchere ahụ kwesịrị ya mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị ngosi a nke ọkụ mmụọ na-agagharị na mbara igwe.
Jgbọ mmiri Fjord
Ọ bụrụ na ịhụ ugwu ọkụ bụ ọnụọgụgụ nke mbụ na mba ahụ, nke a ga-abụrịrị ihe kpatara ọnụọgụ abụọ. Ma ọ bụ na njem mara mma site na ọtụtụ fjords bụ ahụmịhe ọzọ ị ga - ebi n'oge ụfọdụ na ndụ gị. Anyị amataworị, anyị nwere ndepụta na-enweghị ngwụcha nke ihe anyị ga-eme, mana n'ezie, nke a bụ ihe mmadụ niile kwesịrị ịma maka njem ha. Okirikiri ala dị egwu na ndị ahụ nnukwu ugwu dị oke ugwu, nke nwere nsụda mmiri na gburugburu ebe obibi jupụtara na udo na ịdị jụụ na-eju ndị njem kacha nwee ahụmahụ anya.
Na Norway enwere otutu fjords, ha bu kwa asusu nke mmiri mmiri nke emeputara mgbe glaciers lara azu na mmiri nke osimiri juputara na ndagwurugwu. Ha anaghị ajụ oyi, na-eme ka njem ha ga-ekwe omume, ma ha dịkwa omimi nke ukwuu, ya mere a na-agba ụgbọ mmiri buru ibu ileta ha. Ndị kasị ewu ewu bụ ndị nke Nærøyfjord, Sognefjord na Lysefjord, n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ. Enwere obodo abụọ nke na-abụkarị ndị nwere ọdụ ụgbọ mmiri kacha mara amara ịmalite, nke bụ Gudvangen na Geiranger. Agbanyeghị, n'ịntanetị enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye njegharị zuru oke.
Szụ ụgbọ ịnyịnya nke Huskies wetara
Maka ndị anyị bụ ndị na-asọpụrụ nkịta nkịta Nordic, nke a nwere ike ịbụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahụmịhe zuru oke, na-ekpori ndụ na a na-agbapụ site na nkịta siri ike siri ike ndị hụrụ n'anya na-agba ọsọ na nnukwu eke na-ebupụta. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha abụghị ụdị ọkacha mmasị gị, ọ ga-abụrịrị otu n'ime ahụmịhe ndị ahụ ị ga-agwa onye ọ bụla mgbe ị laghachiri n'ụlọ. N'ebe ugwu nke mba ahụ bụ ebe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ebe iji mee ụdị ije a. Otu n'ime ebe kachasị mma bụ Svalbard, na mpaghara ebe enwere site na glaciers na icebergs na nnukwu ubi nke ice na snow, iji tinye oyi na oyi nke Norwegian. Nke a bụ otu ebe ikpeazụ na-enweghị nsogbu na Europe, yabụ njem ahụ kwesịrị ya. Maka ndị chọrọ ụzọ njem ọsọ ọsọ, enwere ike ịme ụzọ ụgbọ ala bara ụba.
Karasjok bụ ebe ọzọ ama ama nke ndi mmadu na enwe obi uto. Agbanyeghị, ebe a nnukwu ihe dị na ya bụ na mgbakwunye na ịme ụzọ gasị ị nwere ike ịnweta klaasị ndị nkuzi husky na ndị ọkachamara n'ọhịa kụziri, ka anyị wee nwee ike iburu sleds ahụ n'onwe anyị. Nke ahụ ọ́ dịghị akpali akpali?
Na-ehi ụra na nkwari akụ ice
Nke a nwere ike ọ bụghị otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ahụmahụ, ma ọ bụ na-otu nke kasị iche. Na Sorrisnivia Igloo nkwari akụ Ọ dị na obodo Alta. A na-edebe ụlọ oriri na ọ atụ atụ na -5 na -7 degrees, ị na-ehi ụra na akwa ụra, akpụkpọ anụ reindeer na akpa ihi ụra kwesịrị ekwesị maka oyi arctic.
Ihe kacha adọrọ mmasị banyere ụlọ oriri na ọ isụ theseụ ndị a bụ nhazi ha na ice, mana ha adabaghị maka ndị na-enweghị ike ihi ụra n'ebughi akpa ahụ, ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ na-egbochi onye ọ bụla. Na mmanya ha na-eje ozi na-atọ ụtọ na-a drinksụ na iko na-ji nke iceYa mere, ajụla maka kọfị na-ekpo ọkụ n'ụtụtụ, ebe ọ bụ na ebe a ọ gaghị ekwe omume, na n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ theyụ ha nwere ụdị nri ndị Norwegian maka ndị ọbịa. N'ezie, ọ bụ ahụmịhe ọhụụ ịgbakwunye na ezumike oge oyi na mba a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Norway » Oke oyi: ezumike ezumike na Norway
Uwe ejiji ọdịnala Cambodia